Mawiricheya muKushanda Kwenzvimbo | Karman® Mawiricheya
Semaonero edu e shanduko yehurema, isu zvishoma nezvishoma tiri kuve nzanga inosanganisa zvivakwa zvedu remara vanhu muzvinhu zvese zve upenyu. Pfungwa yekare yekuti remara vanhu havagone kushanda kana kutungamira zvakajairwa hupenyu ndihwo kuenda zvishoma nezvishoma. Masangano mazhinji uye mazhinji uye mafemu ari kuchinjira kune izvi tsika itsva uye tsvaga vashandi vane hurema hwakasiyana siyana pavanenge vachijairana ne kuva nemawiricheya munzvimbo yebasa.
Dzimwe dzenyaya dzinowanzoitika izvo vanoshandisa wiricheya awona anosanganisira madiki uye akapetana makoridho muzvivakwa, kupaka nzvimbo dzakaomarara kutenderera, kana kunyangwe kungotenga kana kuenda kunoshanyira shamwari nemhuri. Nzvimbo dzisina kukwana kana materu akadzika ari hazviiti kuzvifambisa wiricheya yemanyorero uye unoda an wiricheya yemagetsi zvakare zvimwe zvinhu zvinokonzeresa matambudziko.
Vashandi vanoshandisa mavhiripu vanofanirwa kukwanisa kufamba-famba zviri nyore kuburikidza nehofisi pasina kuvhunduka pamusoro pezvipingamupinyi zvakaita senzira dzakamanikana dzemasitepisi, masitepisi, uye nzvimbo dzisina kukwana dzezvimbuzi dziri kupinda munzira yavo. Kugadzira zvigadziriso munzvimbo dzebasa kubvumidza nyore kuwana kunogona kuita mutsauko wakakura mune iyo remara mushandi anoita uye anonzwa ari kubasa.
VaAmerican vane Rekuremara Mutemo (ADA) yakaunzwa muna1990. Inodzivirira kodzero dzevanhu vakaremara uye kugona kwavo kuzviwanikwa zvezuva nezuva. Mutemo inoda zvese zvivakwa zvehofisi nenzvimbo dzekutengesa kuti zvivakwa zvavo zvive nyore kufambidzana kune vanhu vakaremara. Iyo Yekuchengetedza Basa uye Hutano Kutungamira (OSHA) zvakare inorayira nharaunda yakachengeteka yebasa revashandi vese. Zvakare, inoisa zviyero zve wiricheya kuwanikwa munzvimbo yebasa.
Heino diki runyorwa rwezvinhu zvatinofanira kuedza kuchinjira kwazviri kugara mawiricheya munzvimbo yebasa.
Govera kupaka padyo nemikova yevanhu vari mavhiripu nezvimwe remara vashandi. Izvi zvinosanganisira kutakura mavans kana vashandi vachida rubatsiro mukusvika kuchivakwa. Sarudza imwe yenzvimbo dzakadai padhuze nemusuwo wega wechivako. Isa zvese remara chiratidzo chemunhu uye shandisa pendi yerimwe ruvara kuratidza nzvimbo yega yega. Huwandu hwenzvimbo dzekupaka dzakapihwa remara vashandi vanoenderana nenhamba yenzvimbo mumujenya. Chiyero chakakodzera chinotenderwa nemasangano mazhinji nzvimbo mbiri dzakatarwa dze remara vashandi venzvimbo dzese makumi mashanu.
Ramp ZvemaWheelchair Kupinda muImba Yekushandira
Karman Inotakurika hwiricheya Ramp
Ipa mukana Ramp pamasuo so mavhiripu inogona kuwana nyore uye kusiya chivakwa. Sekureva kwevaAmerica vane hurema Mutemo Zvivakwa uye Zvivakwa Nongedzo, iyo Ramp kurerekera kunofanirwa kuve nemateru e1: 16 kusvika 1:20. Handrails dzinofanirwa kunge dziripo pakadzika Ramp kugonesa vari mu mavhiripu kuzvidhonza. Kuisirwa kwemakwenzi emota kunopa imwe nzira kune Ramp.
Ita shuwa Yekupinda Nzira Dzakakwana Zvakakwana
Ita shuwa kuyera aripo ekupinda uye madhoo. Izvi zvichaona kana izvi zvichisangana nehupamhi hwemasendimita makumi matatu nemasere anoratidzwa mumatanho edzimba dzeADA. Isa hunyanzvi hwemasuo hinji ku zvinopa imwe nzvimbo pakati pegonhi nemusuwo. Kana, iwe unogona kuhaya kontrakta kuti awedzere magonhi. Masuo muchivako chose anofanira kutevera nhungamiro yakati. Izvi zvinosanganisira magonhi ehofisi, magonhi ekuchengetera zvinhu, magonhi emakamuri emisangano, uye masuo ekugezera. Magonhi anofanirwawo kurovera mukati uye kwete kunze kuti abvumire avo kupinda mavhiripu kuvhura magonhi zviri nyore.
OSHA zvinoda a hushoma hupamhi hwenzvimbo ipi neipi isingave iri pasi pe 28 inches paupamhi. Masitepisi anofanirwa kuve nehupamhi hupamhi hwemasendimita makumi maviri nemaviri. Iyo ADA yagara ichikunda chirevo ichi. Vakaraira kuti migwagwa ive inosvika 22 inches in wide kubvumidza kupinda pawiricheya.
Matumba Ekugezera ZvemaWheelchair muPabasa
Zvemawiricheya munzvimbo yebasa, simbisa kana imwe chete remara imba yekugezera mune yega yega yekugezera muchivako. Uyai nekontrakta kuti agadzire mamwe matafura kana kujoina matanga maviri kuti agadzire iri tafura.
Kuwedzera Kamuri ye Mawiricheya muPabasa
Ipa imwe nzvimbo yekuchengetedza bhuku kana wiricheya yemagetsi kana a remara mushandi anoda kugara pachigaro chemuhofisi paanenge achishanda. Gadzira yakakura cubicle nzvimbo kana hofisi nzvimbo yakakura zvakakwana kuti mushandi aende kubva wiricheya kuhofisi cheya. Space inofanirwa kuve yakakura zvakakwana kuti igone a wiricheya, tafura, chigaro chemuhofisi, uye zvimwe zvinhu zvemuhofisi.
Nzira dzekubuda nadzo dzakagadzirirwa mavhiripu
Kuchengetedzeka pabasa uye zvimiro zvehutano mukushanda nzvimbo dzinoda iyo yakanyatsojekeswa uye inochengetedzwa zvakakwana nzira dzekubuda kugadzirwa kuitira kuti vese vashandi, kusanganisira avo vanoshandisa mavhiripu, inogona kubva panzvimbo yacho nenjodzi shoma nekukurumidza uye nemazvo se zvinogoneka. A Ramp fanira kugadzirwa uko nzira yekubuda yakanyanyisa kukwira kana kukandwa l yeiyo wiricheya mushandisi. Stipulations zvakare inoda kuti gonhi rega rega rekubuda rinosara risina kushongedzwa kana zviratidzo zvinovanza kuoneka kwemusuwo wenzira yekubuda.
Vamwe vevashandi vane tarenda vanogona kunge vaine hurema hwese. Panguva chete pakakosha komputa midziyo inodiwa kune vanhu vasingone zvakanaka, izvo zvinodiwa mavhiripu kana kunyange wiricheya yemagetsi inoshamwaridzika Kubasa kwakasiyana siyana.
Matanho atinofanira kuita kuti tione kuti kubasa kunowedzera kufambidzana nokuti vanoshandisa wiricheya zvikuru zvakakosha. Kwete-remara vanhu kashoma kuziva kuti zviri nyore sei kutora zvinhu zvisina basa munzvimbo yehofisi.
Panofanira kunge paine pfungwa ye kuenzana uye kururamisira munzvimbo yebasa. Zvese zviito zvekuwanika munyika hazvireve chero chinhu kana iwe kana vashandi vako mukatadza kuona kupfuura kwe kuremara yemunhu uye haana kuvhurika kuti aenderane neiyo nharaunda nyowani.
Maitiro Eti Kugadziridza Kwako Kubasa Kune Vashandi Vanoshandisa Mawiricheya
Vakaremara Mvura Inonongedzera
Mawiricheya Zviwanikwa - Kuremara uye Kusarura
Pfungwa dzeHofisi yeVashandisi veWiricheya
Kugadzirira Kuenda Kumba muWiricheya Yako Idzva
kupinda Izvi re muna Retail. Bookmark ari permalink.